श्रीमान-श्रीमतीको उमेर कति बर्षको फरक भयो भने दामत्य जीवन सुखमय हुन्छ ? जान्नुहोस -
May 2, 2020 May 25, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on श्रीमान-श्रीमतीको उमेर कति बर्षको फरक भयो भने दामत्य जीवन सुखमय हुन्छ ? जान्नुहोस
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको । धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी रु यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्श्री-मती १ बर्षका जेठो-कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ?
बैशाख २१ गते आइतबारको राशिफल कस्तो छ आजको भाग्य ?
July 5, 2019 अखवार अनलाइन
राष्ट्रपतिद्धारा सातै प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, प्रमुख बिहिन प्रदेश
मोटरसाइकल ओभटेक गरेर युवतीको अपहरण, सामुहिक बलात्कार पछि हत्या गर्ने योजना विफल